ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ (အပိုင်း ၁၂)
အောက်ကတော့ ပီနန်ဂတုံးဘုန်းကြီးရဲ့ အီယောင်ဝါး လိမ်စားဘုန်းကြီးများရဲ့ စကားများပင် ဖြစ်ပါတယ်........ပီနန်ဆိုတာ ဘယ်မှာ ရှိမလဲ မိတ်ဆွေတို့ သိချင်မှာပေါ့ မွတ်စလင်နိူင်ငံမလေးရှားမြို့ တမြို့ ရဲ့ မြို့နာမည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်. ကျုပ်ရင်ထက်မအေး ဖြစ်မီတာကတော့ ယခုလို ဗုဒ္ဓဘာသာများကို တိုးတက်သောနိူင်ငံအတွင်းမှာ ခိုလှုံခွင့်ပေးတော့ ရက်ကွက်အေးငြိမ်းသာယာမူများကို ဖျက်ဆီးမူကို ကြုံတွေ့ရမည့်အရေးပါပဲ၊ လော်စပီကာများနဲ့ မည်သူမှ နားမခံနိူင် ဘယ်သူမှနားမလည်တဲ့ စကားများကို ဖတ်ရွတ် မသိတဲ့ကောင်က မတတ်တဲ့ကောင်ကို ဆရာတင် ကျုပ်တို့ကတော့ ကြားကနေ နားထောင်နေပေးရပါတယ်... ဘယ်ဘာသာမှ (၃)ရက်ဆက် (၄) ရက် ပဌာန်းပွဲများ မရှိပါ၊ စာရေးသူများငယ်စဉ်အခါကတည်းက ဘုန်းကြီးများကို မုန်းသည့်အကြောင်းများစွာထဲကလည်း ဤတချက်ပင်ဖြစ်သည်.... သူလည်း နားမလည် ကိုယ်လည်းနားမလည် ရွတ်လိုက်တဲ့ ပါဠိ( ကုလားစကား)ကို သူဆိုနိူင်တာပဲ အတတ်ပညာရှင်သဖွယ် ဂုဏ်ယူနေကြတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ သူများနာခံနိူ်င် မခံနိူင်ဆိုတာ မစဉ်းစားဘူး ပြောလိုက်ရင်လည်း သူတို့ ဘာသာလောက် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကောင်းတာမရှိဘူး ဗုဒ္ဓဘာသာမှ အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုကြသေးတာကို တွေ့ရပါသေးတယ်။ စာရေးသူနေထိုင်ဖူးခဲ့တဲ့ ရက်ကွက်မှာဆို သူတို့ရဲ့ အသံမစဲ မဟာပဌာန်းပွဲကို ကျင်းပတယ်တဲ့ဗျာ... ရွတ်ရမှာက (၄)ရက် ဒီ(၄)ရက်မတိုင်ခင် သူတောင်းစားဘုန်းကြီးများ ရွတ်နေစဉ်မှာ ငတ်ပြတ်ပြီး လျောသွားမှာစိုးလို့ စားဖို့သောက်ဖို့ အလှူငွေစကောက်တာ(၂)ရက် စာရေးသူမှာ ဤရက်များအတွင်းအိမ်လည်း မပြန်ချင် တကယ်ကို စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ဘာသာပဲဗျာ.. .ကျောင်းသားဘဝဆိုတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့ စာလုပ်ရမှာကလည်း နဂိုကတည်းက ပျင်းတဲ့သူဆိုတော့ ဒီအသံကိုကြား စိတ်ပျက်ရ ညဆိုလည်း အိပ်မရ နေ့ဆိုလည်း စကားကောင်းကောင်းမပြောရ ဆူညံပွတ်လောရိုက်နေတဲ့ ဘာသာတရားကို ခင်ဗျားတို့ပဲ စဉ်းစားကြည့်ပါဗျာ..... ဘယ်မှာလဲ ငြိမ်းချမ်းမူ သရဲပြေးအောင် ရွတ်တယ်တဲ့ သရဲတော့ မပြေးပါ သရဲတွေ ရွတ်လို့ လူတွေပဲ ပြေးနေရတယ်ဗျာ... အောက်ကတော့
ပီနန်ဆရာတော် သြ၀ါဒကထာ တဲ့ဗျာ
ဘယ်လိုကောင်းနိူင်မလဲ။ (မကောင်းတဲ့သာသနာနဲ့ မင်းတို့ ဖျက်ဆီးနေလို့ နိူင်ငံကြီးပျက်ရတာပေါ့)
နိူင်ငံ ဆိုတာ (ဌာန) အိမ်လိုပဲ၊ ( ဟုတ်ပါတယ်ငနာရယ် သာသနာအကောင်းနဲ့ဆို (ဌာနီပေါ့))
သာသနာဆိုတာ (ဌာနီ) အိမ်ပေါ်မှာ
အိမ်ကြီးက ယိုယွင်းပျက်စီးနေရင် အိမ်ပေါ်မှာနေတဲ့ လူတွေ ဘယ်လို လုပ်နေမလဲ။
သာသနာရေးနှင့် နိုင်ငံရေး တွဲမလုပ်သင့်ဘူးလို့ ပြောနေတာ သာသနာရေးနှင့်
နိူင်ငံရေးကို ကွဲကွဲပြားပြား မသိလို့ပါပဲ ။
(ဟုတ်ပါတယ် မင်းတို့ သာသနာနဲ့ နိူင်ငံရေးတွဲလုပ်နေလို့လည်း ငါတို့ကြားထဲက ပြည်သူတွေ သူတောင်းစား ဘ၀နဲ့ သူများနိူ်င်ငံမှာ ခိုလှုံနေရတာပေ့ါ ငနာဘုန်းကြီးတွေ၇ဲံ ငနာဘုန်းကြီးတွေများ စကားကို ဖာသယ်ကျတာကြည့်ပါလား သူတို့အမှားကို သူများအမှားဖြစ်အောင် လုပ်ချင်ကြတယ်)
(မိစ္ဆာသာသနမောဠိ ဥက္ကဌ ပီနန်ဆရာတော်)
ကြည့်ပါအုံး သူစကားလေးတွေ ရုတ်တိတန်လား မတန်လားဆိုတာ မစဉ်းစားတာ တကယ်တော့ ကျုပ်တို့နိူ်င်ငံဟာ သာသနာမကောင်းခဲ့လို့ မြန်မာနိူင်ငံကြီးဟာ ပျက်စီးနေရတာပါ။ အခုပဲ ကြည့်လေ ကျန်ခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာအရေးအခင်းဟာ စစ်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ဂတုံးတွေနဲ့ အာဏာလုတဲ့ပွဲပါ... လုတွေက ကုန်ဈေးနှုန်းကျဖို့ တောင်းခဲ့တာပါ..... ဂတုံးဘုန်းကြီးတွေက သူတို့ ဂတုံးတကောင်ကို စစ်အာဏာပိုင်တွေက ကြိုးကွင်းပစ်ဖမ်းလို့ ဆန္ဒပြတာပါ.... ဒီအစိုးရလည်း သူတင်ထားတာပဲ ဒီအစိုးရကလည်း သူကို ပူဇော်ပုသပေးနေတာပဲ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အလွန်းတည် ချစ်ခင်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ပြီးမှ နောက်ဆုံးတော့ အပြစ်ရှိသမျှအားလုံး စစ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အပြစ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီလိုပြောလို့ စာရေးသူကိုယ်တိုင်က စစ်အာဏာပိုင်များကို လက်ခံသူမဟုတ်ပါ.... စစ်အာဏာပိုင်များနဲ့ ဂတုံးဘုန်းကြီးတွေ အဝေမတည်ထချတဲ့ပွဲလို့ပဲ စာရေးသူမြင်မိပါတယ်.... နှစ်ကောင်စလုံး(နှစ်မျိုးစလုံး) အတူတူပဲ၊ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာကို အဝေအမျှခွဲပြီး လိမ်စားနေတဲ့ကောင်တွေ ... အဲမှာ ဂတုံးဘုန်းကြီးတွေ ထောင်ထဲထည့်ပြီး အကျဉ်းချတာကို ရက်သိရွာသိကမ္ဘာကို ကြေညာလို့ ....ဟုတ်တယ် သူတို့တွေ ခရစ်ယာန်ဆရာတော်များကို သတ်ဖြတ်တာ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို မီးရှို့  တာတွေ မွတ်စလင်ဗလီဆရာတော်များကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တာ ဗလီဆရာများကို ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ပစ်တာလည်း မနည်းပါ. အဲ့တာကြတော့ ဘာတခုတလေမှ မဟကြဘူးဗျာ.... သူဘုန်းကြီး နှစ်ကောင်သုံးကောင်လောက် ထောင်ချသတ်ခံနေရတာကို သူများလိုချင်မှန်းမသိ မလိုချင်းမှန်းမသိ အီးမေး တွေနဲ့ ဖြန့်ချီ ရပ်သိရွာသိ ကမ္ဘာသိအောင် ကြေငြာကြတယ်. ..သြော်ဟိုတချိန်က မြန်မာတွေ ခုနှစ်အိမ်ကြား ရှစ်အိမ်ကြားအောင်ပဲ အာဗြဲ ပြီး အော်နိူ်င်တယ် ထင်ခဲ့တာ အခုတော့ ကမ္ဘာသိအောင်ပါ အာဗြဲအောင် အော်နိူ်င်ကြပါလား ဗုဒ္ဓဘာသာကြောင်သူတော်ကြွက်သူခိုးတို့ရေ.
Posted by messenger at 1:22 AM
Labels: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ, အလိမ်အညာသြ၀ါဒ